फेरि लागु भयो यस्तो अनौठो नियम, – Paluwa Khabar
फेरि लागु भयो यस्तो अनौठो नियम,
अषोज १०, २०७८ आइतबार 47
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कुकुर पाल्न सौखिन कुकुरधनीले अब आफ्नो कुकुर वडा कार्यालयमा अनिवार्य दर्ता गराउनुपर्ने छ । घर पालुवा कुकुरको उचित संरक्षण नगरिएको, बटुवा वा छरछिमेकमा है’रानी ग’राएको र सार्वजनिक स्थलमा म’लमूू’त्र त्या’ग गराएर फोहोर गरेपछि दर्ता अभियान सुरु गर्न लागेको हो । महानगरले सचेतना अभियान चलाउँदा पनि नभएपछि अब दोस्रो चरणमा कुकुर धनीलाई का’रबाहीसमेत गर्ने भएको छ *** अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस***
एजेन्सी – भारतमा क’र’णीका घटनाहरु दिनहुँ बढिरहेका छन्। हालै सार्वजनिक एक बलात्कारको घटना शरिर नै सिरिङ्ग हुने किसिमको छ। महाराष्ट्रको ठाणे जिल्लामा सामूहिक क’र’णीको एक दर्दनाक घटना सार्वजनिक भएको छ। यस वर्षको जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म २९ जनाले १५ वर्षीया बालिकाको क’र’णी गरेको पाइएको छ।
घटनामा संलग्न बालिकाका साथीले शुरुमा उनलाई क’र’णी ग’रे’र भिडियो बनाएका थिए। त्यसपछि सोही भिडियोमाफर्त ब्लाकमेल गरी उनले आफ्ना साथीहरुबाट पनि बालिकाको क’र’णी ग’राएका थिए। बुधबार मात्र प्रहरीमा उजुरी आएपछि यस घटनाको प’र्दा’फा’स भएको हो।
ठाणे चौकीका अतिरिक्त प्रहरी आयुक्त दत्तात्रेय करालेले मनपाडा प्रहरी स्टेशनमा गएर बालिकाले उजुरी दिएकी बताएका छन्। उनी नौ महिनादेखि बलात्कृत हुँदै आएको उनले जानकारी दिएका छन्।
नौ महिनामा २९ जनाले आफूलाई क’र’णी ग’रे’को किशोरीले बताएकी छिन्। जनवरीदेखि उनी २२ सेप्टेम्बरसम्म भिन्नभिन्न व्यक्तिबाट पटकपटक क’र’णी भ’एकी छिन्।
प्रहरीले विशेष अभियानमार्फत घटनामा संलग्नहरुको खोजी शुरु गरेको छ। हालसम्म २३ जना पक्राउ परेका छन्। तीमध्ये केही आरोपीहरु पीडित बालिकाको पहिचानका मान्छेहरु रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
प्रहरीका उच्च अधिकारीले नै घटनाको अनुसन्धान जारी राखेका छन्। थप आरोपीहरुको खोजी भइरहेको बताइएको छ। हाल बालिकालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको छ।
Prevकोरोना भन्दा खतरनाक रोग विश्व भरि फैलिदै , नेपाल पनि देखिन सुरु
Nextपूर्व प्रधानमन्त्री ओली र विपल्वबिच यस्तो भयो सहमती , अब के हुन्छ ?
अन्तत माधव नेपालले बुझाए ओलीलाई यस्तो स्पष्टिकरण, अरु सांसदले के भने ? (पत्र सहित)
प्रधानमन्त्रिबाटनै राष्ट्रिय स्वाधिनता कमजाेर पार्ने काम भयाे – प्रवक्ता नारायणकाजि
बाघकाे आ’क्रमणमा फेरि एक जनाकाे ज्या’न गयाे